अर्को श्रीमान् खडा गरी सम्पत्ती कुम्ल्याएर हिडेपछि…. – HostKhabar ::
अर्को श्रीमान् खडा गरी सम्पत्ती कुम्ल्याएर हिडेपछि….
इटहरी : मनभरि सपना बुनेर आफ्ना जहान परिवारलाई सुखी राख्नका लागि २० वर्षपहिले विदेशिएका लक्ष्मीकुमार गुरुङको सपना चकनाचुर भएको छ ।
मोरङ सुन्दरहरैंचा –१० विराटचौकका लक्ष्मीकुमार आफूले कमाएको करोडौं रुपैयाँ लिएर श्रीमती गङ्गामाया गुरुङ भागेपछि अहिले विरक्तिएका हुन् ।
रोजगारीको सिलसिलामा २० वर्षपहिले साउदी अरब पुगेका लक्ष्मीले विदेशी भूमिमा आफ्ना जहान परिवारका लागि दिनरात नभनी पसिना चुहाएर दुःख गरी काम गर्दै आएका थिए । श्रीमती र छोराहरूलाई सुखमा नै राख्दै आएका लक्ष्मी अहिले विरक्तिएका छन् । विदेशमा दुःखले कमाएको रकम अहिले श्रीमतीले लिएर गएपछि उनी प्रशासनमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।
विदेशबाट अहिलेसम्म ७ करोड जति कमाएको बताउँदै आफूले कमाएको सारा सम्पत्ति कुम्ल्याएर श्रीमती अहिले बेपत्ता भएको उनले बताए । आफूले विदेशबाट पठाएको रकम र सुन लिएर श्रीमती गङ्गा हिँडेको भन्दै अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा उनले उजुरी दिएका छन् । बिर्तामोडमा ८ वर्षअगाडि १५ लाखमा किनेको जग्गा अहिले अर्को श्रीमान् खडा गरेर बिक्री गरेर हिँडेपछि लक्ष्मीको अहिले कन्तबिजोक भएको छ ।
श्रीमती गङ्गा २ छोरालाई समेत सँगै लिएर मङ्सिर ७ गतेदेखि फरार भएको उनको भनाइ छ । ‘शुरुमा घरको विषय घरमै मिलाउँ भन्ने भयो । श्रीमतीले मलाई जबरजस्ती विदेश जानू भनेकी थिइन् । मैले ५२ वर्षको उमेरमा विदेश जान्नँ भन्दा श्रीमती टाढिइन्, अहिले आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसासमेत लिएर गइन्, मेरो अहिले विजोक भएको छ’–लक्ष्मीले भने ।
‘सुन्दरहरंैचा–१० मा डेढ तले घर र दुई कठ्ठा जग्गा छ तर त्यो पनि श्रीमतीकै नाममा छ’ उनले दुःखेसो गरे, ‘२० वर्ष ४ महिना विदेशमा दुःख गरी कमाएको सबै पैसाको हिसाब उनीसँगै थियो । मसँग अहिले पैसा, हिसाब केही पनि छैन ।’ ‘मेरो दाँत पनि खुस्की सक्यो अब म विदेश कसरी जाउँ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मलाई मेरो श्रीमतीले किन विदेश जानू भनिन् ?’
२ छोरा र १ छोराकी आमा गङ्गाले लिएर गएको सम्पत्ति फिर्ता गराउनका निम्ति लक्ष्मी अहिले कानूनी उपचार खोज्दै हिँडेका छन् । ‘मेरा दुई छोराहरू पनि लिएर बेपत्ता भई । मलाई भाग्यले पनि यति धेरै ठग्यो, अहिले गाउँमा रहेको घरबाहेक कुनै सम्पत्ति छैन’–उनले भने ।
यता इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी महिला सेलकी मोना विष्टले लक्ष्मीले श्रीमती हराएको भन्दै खोजी गरी पाउँ भनी उजुरी परेको बताइन् । हुलियासहितको उजुरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ । उजुरी परेको आधारमा उनीहरूलाई खोजी गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘मलाई श्रीमतीले माया गरिनन्, पैसालाई मात्र माया गरिन्, अहिले बुढेसकालमा आफूसित न परिवार, न पैसा भयो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले मेरो सबै मोबाइल नम्बर ब्लक गरेका छन् ।’